Hutano, 08 Ndira 2019
Chipiri 8 Ndira 2019
Zvikoro Zvinokuridzirwa Kuve Nemirairo Yekutakurwa Kwevana Vechikoro
Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinoti ratangidza kutaura nevakuru vezvikoro pamusoro pemabhazi nemotikari dzinoshandiswa kutakura vana vechikoro vachienda kana vachibva kuzvikoro.
Vana Chiremba Vanoti Vari Kutaurirana neHofisi yaVaMnangagwa
Sangano rinomiririra vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende, reZimbabwe Hospital Doctors Association, ZHDA, rinoti pane vanhu vanga vachiendesa mashoko emanyepo kumutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnanagwa, pamusoro pezvichemo zvavo.
VanaChiremba Vari Kuramwa Mabasa Vomirira Kunzwa Kubva kuMutungamiri weNyika
Sangano rinomirira vanachiremba vari kuramwa mabasa reZimbabwe Hospital Doctors Association, rinoti ramirira kunzwa kubva kumutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa mushure mekunge raita musangano nenhumwa dzavo neChitatu.
Ndira 02, 2019
VaMnangagwa Vodimbura Zororo Asi Vachitambirwa neKuramwa Mabasa Muzvipatara
Hofisi yemutungamiri wenyika neChitatu yakaita musangano navanachiremba vari kuramwa mabasa kekutanga kubva zvakatanga vanachiremba ava kuratidzira musi wa 1 Zvita gore rapera.
Kanzuru yeHarare Yoronga Kuwanisa Vanhu Mvura Munguva Dzakasiyana
Kanzuru yeHarare yazivisa kuti ichatanga kugovera mvura nguva dzakasiyana nekuda kwekuderera kwemvura pamwe nekuwanda kwetsvina munyanza yeLake Chivero.
Mutungamiri weNyika VaMnangagwa Vanosiira Zororo Panzira
Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakaburitsa mashoko padandemutande reTwitter ekuti VaMnangagwa vakanga vave kudzokera kubasa kuti vabatsirane nemutevedzeri vavo mukugadzirisa zvinhu muboka rezvehutano izvo zvaita manyama amire nerongo.